နလံထဧရာဝတီကို ဒေါသပွားနေသူများ (ဆောင်းပါးရှင် မောင်မောင်ဝမ်း) ~ ဒီမိုဝေယံ
နလံထဧရာဝတီကို ဒေါသပွားနေသူများ (ဆောင်းပါးရှင် မောင်မောင်ဝမ်း)
မြန်မာလူထုရဲ့ နှလုံးသည်းပွတ်ဖြစ်တဲ့ ဧရာဝတီကို အဖတ်ဆယ်ဘို့ လူထုရဲ့ဆန္ဒတွေ ပွင့်အန်ထွက်လာကြတာ အားလုံးအသိပါပဲ။ ပြည်တင်းလျှင် မင်းမခံနိုင်ဆိုသလို…. လူထုဆန္ဒကို အထိုက်အား လျှော်စွာမျက်ခြေမပြတ်ဘူးလို့ ဆိုနိုင်တဲ့လက်ရှိ အစိုးရသစ် သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကတော့… ဒီကိစ္စအပေါ် ရပ်ဆိုင်းလိုက်ဆိုင်းလိုက်ခြင်းကို.. အားလုံးနီးပါးသော ပြည်သူလူထုကြီးကလည်း ကြိုဆိုခဲ့ကြတယ်။ တတိုင်းပြည်လုံးနီးပါး ဝမ်းမြောက်ခဲ့ကြရတယ်။
သို့သော် ၀မ်းမြောက်မှု့တွေက သိပ်မကြာလိုက်ဘူး…။ စိတ်ပျက်စရာ၊ ၀မ်းနည်းစရာ၊ ဒေါသထွက်စရာ တွေက နောက်ဆက်တွဲ ပါလာတော့တယ်….။ ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်နဲ့ တိုက်ပွဲတွေက.. စိတ်အစဉ်ကို ခါးသီးစေခဲ့တယ်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ မလွတ်မြောက်သေးတာက.. မချင့်မရဲဖြစ်စေခဲ့တယ်…။ တရုတ်အစိုးရရဲ့ ဒေါသနဲ့တုန့်ပြန်သံတွေဟာ… တမျိုးသားလုံးကို သတိရှိဘို့ လှုံ့ဆော်နေတယ်။ ဒါတွေကို ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအနေနဲ့ ကိုင်တွယ်တတ်ဘို့လိုပါတယ်…။ မိမိနိုင်ငံတွင်း ပြသနာတွေက အရေးကြီးသလို.. ပြည်ပရန်ကလည်း အထူးကို သတိကြီးကြီး ထားရမှာပါ။
ဦးစွာပထမ.. ပြည်တွင်းမှာ အဓိကကျတဲ့ ပြသနာတွေကို အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းနိုင်ဘို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
- နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးလိုက်ရင်...
- ပြည်တွင်းမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပြည်တွင်းစစ်မီးကို အမြန်ဆုံး ငြိမ်းသတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်….
- အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို အစွမ်းကုန် ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်
- လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်နေမှုများကို အမြန်ဆုံးရပ်တန့်လိုက်မယ်ဆိုရင်…..
တမျိုးသားလုံးရဲ့သွေးစည်းညီညွတ်မှု အားဟာ…တော်တော် ခိုင်မာလာနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ လုံးဝကိုအချိန်ဆွဲလို့ မရတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ လတ်တလောမှာ… ပြည်ပရန်က အရေးကြီးနေပြီ မဟုတ်ပါလား…။ ယခုဆိုလျှင်… တရုတ်အစိုးရရဲ့ တုန့်ပြန်ချက်မှာ မြန်မာကို မှတ်လောက်အောင် သင်ခန်းစာပေးရမယ်ဆိုတာ.. ဘာကိုဆိုလိုပါသလည်း… ဘယ်လိုတွေနဲ့ သင်ခန်းစာ ပေးချင်တာပါလည်း…. သင်တို့သင်ခန်းစာပေးတိုင်း မြန်မာတွေက ခေါင်းငုံ့ခံမယ်လူမျိုးတွေလို့ ယုံကြည်နေပါသလား….။ မြန်မာတွေဟာ အမျိုးသားရေးနဲ့ ပတ်သက်လာရင်… ဆတ်ဆတ်ထိ မခံတတ်တဲ့ လူမျိုးတွေဆိုတာ သင်တို့သိပါလေစွ….။
သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရအနေဖြင့် ယင်းကိစ္စအပေါ်… တရုတ်အား အလျှော့ပေး ဆက်ဆံနေမည်ဆိုပါ လျှင် ရရှိပြီးသား လူထုထံမှ အမှတ်များ လျှောကျသွားမည် ဖြစ်ယုံမက… မယုံမကြည်မှု့များသည်။ ယခင်ကထက် ပိုမိုဆိုးဝါးသွားနိုင်ပါသည်။ လက်ရှိအခြေနေတွင် အစိုးရအနေဖြင့် လမ်းကြောင်းနှစ်ကြောင်း အနက်တခုခုကို ရွေးချယ်ရပေတော့မည်။ မြန်မာလူထုအကျိုးစီးပွားနဲ့ ထောက်ခံမှု့ကိုယူမလား……။ တရုတ်အစိုးရ၏ အပြုံးစတချက်ကို ရင်ဝယ်ပိုက်မည်လား။ နှစ်ခုစလုံးပြိုင်ရွေးလို့ မရစကောင်းပါ။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် တရုတ်အစိုးရ၏ အထောက်အပံ့ကြောင့် တိုင်းပြည်ထူထောင်လာသော နိုင်ငံမတွေ့ဘူးသေးပါ။
တခြားတဘက်တွင် သတိထားသင့်သည်မှာ… ယခုကိစ္စသည်.. တရုတ်အစိုးရ၏ မနှစ်မြို့စရာသော နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး ပေါ်လစီကို ကန့်ကွက်ခြင်းဖြစ်သည်…။ လူမျိုးရေးဆန့်ကျင်မှု့မဟုတ်ပါ… ဒါကိုသဲသဲကွဲကွဲ ခွဲမြင်စေလိုပါတယ်…။ တရုတ်အစိုးရနဲ့ တရုတ်လူထုကို ခွဲမြင်တတ်ဘို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တန်းက တရုတ်နိုင်ငံကြီးသည် တိုးတက်ပါသည်လို့ဆိုပေမဲ့… သန်းပေါင်းများစွာသော လူထုကြီးက… ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရဆဲပါ…။ ခါးသီးလှတဲ့ ကွန်မြူနစ်အစိုးရရဲ့ရက်စက်မှုတွေကို နေ့တဓူဝ ကြုံနေဆဲပါ။ ယခုကိစ္စသည် တရုတ်လူမျိုး ဆန့်ကျင့်ရေးမဟုတ်…။ တရုတ်ကွန်မြူနစ်အစိုးရ၏ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်စေသော လုပ်ရပ်အား မနှစ်မြို့ခြင်းသာဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်တရုတ်နိုင်ငံ၏ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရင်းနှီးမြှုတ်နှံမှုများကို ဆန့်ကျင်ခြင်းလည်းမဟုတ်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံအနေဖြင့် ဈေးကွက်စီးပွားရေးကို အကောင်ထည် ဖော်ရာတွင် ပြည်ပရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု့များသည် လွန်စွာမှအရေးပါ…ပါသည်။ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစံနစ်ကို အကောင်ထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသောကြောင့် ပြည်ပရင်းနှီးမှု့များကို လက်ခံရမည် ဆိုသော်ငြားလည်း….. မိမိတို့နိုင်ငံ၏ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနှင့် အမွေအနှစ်များကို ထိပါးလာမည်ဆိုလျှင် မည်မျှပင်အကျိုးမြတ်ရှိနေပါစေ……လက်မခံသင့်ပါ။
တရုတ်မို့ ဆန့်ကျင်ခြင်းလည်းမဟုတ်၊ အကယ်၍ .အမေရိကန်နိုင်ငံမှ…. ပုဂံရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်နေရာများကို ဟော်တည်တွေ ကစားကွင်းတွေ တည်ဆောက်မည်ဟု ကြံရွယ်ခဲ့လျှင်လည်း လက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ (ပြင်သစ် ရေနံကုမ္ပဏီကြီးကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ခြင်းက သက်သေရှိပါသည်)။ မိမိတို့လူထုသာလျှင်မက အစိုးရကိုယ်တိုင်က မူအရဆန့်ကျင်ခြင်းအပေါ်….. တရုတ်အစိုးရမှ မြန်မာအားကောင်းကောင်း သင်ခန်းစာပေးရ မည်ဟု မျက်မာန်ရှခြင်းသည်…. လက်ခံနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိပါ……။ အမျိုးသားရေး ဂုဏ်သိက္ခာအရ တွန်းလှန် သွားမည်ဖြစ်သည်။